Xiddigaha Ugu Waaweyn Dalka Brazil Oo Si Xun Ugu Kala Qaybsamay Siyaasadda Dalkooda Iyo Murashaxa Ay U Codaynayaan | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Xiddigaha Ugu Waaweyn Dalka Brazil Oo Si Xun Ugu Kala Qaybsamay Siyaasadda Dalkooda Iyo Murashaxa Ay U Codaynayaan
(13-10-2018) Murashaxa midigta fog, Jair Bolsonaro ayaa kala qaybsanaan badan ka dhex abuuray halyeeyadii waaweynaa ee kubadda cagta dalka Brazil, kuwaas oo qaarkood si badheedh ah ula safteen kuwo kalena kasoo horjeedsadeen.
Xiddigo ay ugu horreeyaan Ronaldinho iyo Rivaldo ayaa si badheedh ah u shaaciyey inay u codayn doonaan Jair Bolsonaro doorashada dhowaanta dhacaysa, hase yeeshee hal ciyaartoy ayaa si toos ah uga hor yimid doorashadooda aan qarsoodiga ahayn, waxaanu ku tilmaamay in bahda kubadda cagta ay tahay in aanay ku milmin siyaasadda.
Ronaldinho oo adeegsanaya bartiisa Instagram ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo, dalkiisana ay u wanaagsan tahay Bolsonaro, waxaana arrintaaas ku waafaqay Rivaldo oo markiiba ku dhawaaqay inuu u codayn doono.
“Wuxuu u wanaagsan yahay Brazil, waxaan doonayaa nabad, amaan iyo in qof walba ay farxaddii dib ugu soo laabato, waxaanan doortay inaan ku noolaado Brazil.” Sidaas waxa bartiisa bulshada ku daabacay Ronaldinho oo markiiba ay dad aad u tiro badan kaga fal celiyeen jawaabo togan iyo kuwo taban.
Qoraalkan kooban oo uu la socday sawirka murashax Bolsonaro, ayaa waxa markiiba soo dhaweeyey Neymar iyo Gabriel Jesus oo saaray calaamadda (LIKE), ka hor intii aanay kusoo biirin Felipe Melo, Lucas Moura iyo Cafu.
Intaas kaddib waxa isaguna bartiisa soo dhigay farriin aan gabbasho lahayn, halyeygii hore ee xulka qaranka Brazil iyo kooxda Barcelona ee Rivaldo, waxaana uu ku yidhi qoraalkiisa: “Waxaan u codaynayaa Bolsonaro.”
Murashax Bolsanaro ayaa waxa lagu eedeeyey in uu yahay cunsuri aan jeclayn dadka asalkoodu kasoo jeedo Afrika, waana sababta uu halyeygii kooxda Lyon ee Juninho Pernanbucano uga soo horjeedo in ciyaartooyadu ay si badheedh ah u taageeraan.
Farriin uu ugu jawaabayo Ronaldinho, Rivaldo iyo xiddigaha kale ee kusii waafaqay dookhooda, ayaa waxa uu yidhi: “Waan murugooday markii aan arkay ciyaartoy amaba laacib hore oo isaga taageeraya.”
Si kastaba ha ahaatee, doorashada dalka Brazil oo uu ka maqan yahay madaxweynihii hore ee Lula da Silva oo dhowaan xukun maskamadeed ku dhowaaqay ayaan la ogeyn in murashaxa garabka midig uu ku guuleysan doono iyo in madaxweynaha hadda talada hayaa uu kusoo laaban doono.